Kedu ihe ndị a chọrọ maka ịlụ di na nwunye na ụka? | Bezzia
Kedu ihe ndị a chọrọ maka ịlụ di na nwunye na ụka?
Maria onyekwere | 06/10/2021 10:00 | Agbamakwụkwọ
Otu n'ime mkpebi mbụ di na nwunye chọrọ ịlụ onwe ha ga -eme bụ maka ụdị agbamakwụkwọ ha chọrọ, nke obodo ma ọ bụ nke okpukpe? Ọ bụrụ na gị na onye mmekọ gị ekpebiela lụọ di na nwunye N'okpuru iwu nke Ụka Katọlik, a ga -enwe ihe ụfọdụ ị ga -emerịrị.
Kedu ihe ndị a chọrọ maka ịlụ di na nwunye na ụka? Nke bụ isi bụ ịga na parish gị ka ị chọpụta ụdị akwụkwọ ị ga -ebufe tupu emee agbamakwụkwọ ahụ. Ozugbo gị na onye ụkọchukwu parish zutere, ị ga -ebu ụzọ lụọ di na nwunye kpokọta akwụkwọ achọrọ maka imeghe faịlụ alụmdi na nwunye.
1 Chọpụta ya na parish gị
2 Mụọ ihe tupu ị lụọ di ma ọ bụ nwunye
3 Họrọ ndị akaebe abụọ maka ikwu okwu
4 Chịkọta akwụkwọ gị
Chọpụta ya na parish gị
Ị kpebiela ịlụ na chọọchị? Nzọụkwụ mbụ bụ ịga parish ebe ịchọrọ ịlụ di ma ọ dịkarịa ala otu afọ tupu oge eruo iji gwa gị ihe niile chọrọ na dobe ụbọchị maka njikọ ahụ.
Onye ụkọchukwu parish ga -agwa gị ha abụọ akwụkwọ nke ị ga -enyefe Tupu eme mmemme agbamakwụkwọ okpukpe Katọlik gị, yana kalenda nke usoro ọmụmụ tupu ị lụọ di na nwunye ị ga -eme yana mkpa ime ọnwa ole na ole tupu agbamakwụkwọ ahụ were okwu ọnụ na ndị akaebe abụọ.
Mụọ ihe tupu ị lụọ di ma ọ bụ nwunye
Ọ bụ otu n'ime ihe achọrọ n'aka ịlụ di na nwunye na ụka. Ha na -enwe usoro ọmụmụ nke ọ na -atụgharị uche n'ezinaụlọ na ndụ ọnụ, na -eche ihe isi ike ndị nwere ike ịdị, mkpebi esemokwu na ụfọdụ echiche Akwụkwọ Nsọ na ụkpụrụ ụka gbasara alụmdi na nwunye na mmekọ nwoke na nwanyị.
Oge ihu na ihu na-abụkarị nnọkọ otu, na -ezute n'ime ha di na nwunye dị iche iche nwere mmasị ịlụ onwe ha na ụkọchukwu parish. Enwere ike ịme ha na parish ọ bụla yana ọbụlagodi n'ịntanetị ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ka onye ọ bụla n'ime di na nwunye ahụ bịa n'onwe ya. Ọ bụghị ụka niile na -enye ha mana ọtụtụ na -agbakwụnye na ha ihe ọmụmụ weebụ dị ka onye ọzọ.
Kedu mgbe ekwesịrị ime ha? Ha na -erikarị ọtụtụ nnọkọ, yabụ na ọ dị mma bụ ịga akwụkwọ alụmdi na nwunye ọnwa isii tupu alụmdi na nwunye ka ị ghara imesi ike karịa ka ị kwesịrị ime mgbe ụbọchị na -abịa.
Họrọ ndị akaebe abụọ maka ikwu okwu
Ihe ọzọ a chọrọ iji lụọ na chọọchị bụ iwere okwu, usoro nke ma ndị lụrụ di na nwunye na ndị òtù ọlụlụ na -ekere òkè na ya. ndị akaebe abụọ, otu na -anọchite anya ndị otu di na nwunye ọ bụla. Ndị akaebe a ga -emerịrị ọtụtụ ihe achọrọ: bụrụ afọ iwu ma ghara ịjikọ ya na ndị ọrụ nkwekọrịta. Ha enweghị ike ịbụ ndị otu ezinụlọ, mana ha ga -amatarịrị ndị di na nwunye n'ọdịnihu.
Ndị akaebe ga -ahụ maka ịgbazi, na -aza ọtụtụ ajụjụ onye ụkọchukwu parish jụrụ, na ị ga -alụ n'efu nakwa na ọ dịghị ihe mgbochi ime otú ahụ. Ọ ga -abụ onye ụkọchukwu parish ga -egosi ụbọchị nzukọ a, nke a na -emekarị ọnwa abụọ ma ọ bụ atọ tupu agbamakwụkwọ.
Chịkọta akwụkwọ gị
Ọ ga -abụ onye ụkọchukwu parish ga -agwa gị usoro akwụkwọ dị mkpa ị ga -eweta iji mepee faịlụ alụmdi na nwunye, mana anyị ebula ụzọ chee na ihe achọrọ maka agbamakwụkwọ Katọlik bụ otu na diọcese Spanish dị iche iche. Ị ga -achọ:
Photocopy nke DNI, paspọtụ ma ọ bụ kaadị obibi nke onye ọ bụla nọ na di na nwunye.
Photocopy nke Akwụkwọ Ezinụlọ nke nne na nna ebe edere aha gị.
Baptizim nke di na nwunye abụọ. Ị ga -arịọrịrị ya na parish ebe emere gị baptizim, na -enye aha gị, aha nna gị na afọ nke baptizim.
Akwụkwọ asambodo nkịtị nke onye ọ bụla na -alụ ọhụrụ. A na -arịọ ya na ndekọ obodo nke obodo amụrụ, n'ozuzu site na nhọpụta.
Asambodo okwukwe na ọkwa. Arịrịọ ya n'akwụkwọ ndekọ aha obodo nke dabara na adreesị gị mbụ, n'ozuzu site na nhọpụta.
Akwụkwọ asambodo tupu alụmdi na nwunye.
Ọ bụrụ na otu n'ime di ma ọ bụ nwunye ya nwụrụ ma ọ bụ na ọ nọla lụrụ nwanyị mbụ, A ga -arịọkwa akwụkwọ alụmdi na nwunye na akwụkwọ ọnwụ nke di ma ọ bụ nwunye na nke mbụ yana akwụkwọ ịgba alụkwaghịm na nke abụọ.
Steeti Spanish na -amata alụmdi na nwunye iwu kwadoro, yabụ na ịgaghị eme ememe alụmdi na nwunye na ndekọ aha obodo ma ọ bụ n'ụlọ ikpe. Agbanyeghị, ọ bụrụ na inwere, ị ga -enwerịrị asambodo alụmdi na nwunye obodo gị yana nnomi ya dị mma.
Ugbu a ị maara ihe niile achọrọ tupu a agbamakwụkwọ zuru okè.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » si ebi ndụ » Agbamakwụkwọ » Kedu ihe ndị a chọrọ maka ịlụ di na nwunye na ụka?
Ihe nkpuchi ihu kukumba ị kwesịrị ịnwale
Ndụmọdụ iji gbasaa n'ụzọ kachasị mma na onye gị na ya na -emekọ ihe